Inhaler "Dolphin" - kuyinto eyinkimbinkimbi Amalungiselelo ngokujulile ngesigezo nasopharynx. Ngokungafani nezinye izidakamizwa ezisetshenziselwa yezifo ingaphakathi acinene, umuthi aqede hhayi kuphela izimpawu ngokushesha kodwa futhi kukusiza ukuba ususe kakhulu umthombo sifo. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe izingxenye zemvelo nje ivumela ngisho abesifazane abakhulelwe, abantu abanezifo ezithile chronic izingane ukusebenzisa umkhiqizo "Dolphin" ngokuphepha. Impendulo kulabo abaye basebenzisa nesifutho, wathi ngisho nangemva eyodwa ukugeza ngokushesha bakwazi ukuphefumula ngaphandle nobunzima.
Namuhla, abantu abaningi abahlushwa izifo nasopharynx: namathansela, sinusitis, sinusitis nabanye abaningi. Esabelweni sansuku yesifo enjalo ithinta nokuwohloka kwemvelo, ngokuyinhloko kubangelwa ukungcola komoya, kumoya chemical kwekhabhoni.
Inhaler "Dolphin" kusiza abantu ukuba bafunde thina nokufundisa izingane njalo ukulondoloza ihlanzekile futhi inempilo acinene ingaphakathi. Njengoba sazi ukuthi amagciwane zokuphefumula yokuzalela indawo enkulu nolwelwesi lwamafinyila we nasopharynx, futhi nabo okungenani ibe namagama angu- 80% eziyingozi izinto, uthuli, ukungcola, lamagciwane, okuyinto ithathwe eBhayibhelini umoya imuncwe Bangalinganisa nanzuzoni iba Manje izidakamizwa "Dolphin" . Izimpendulo ezivela kulabo kakade waqala ukuyisebenzisa, Zishiya instillation esezingeni amathonsi, bathi akusadingeki ukuthi lihlale phansi, nekhanda lakhe phezulu, elinde Drop ukungena ngaphakathi komgodi we nasopharynx. Ngaphezu kwalokho, uma ukudedelwa acinene aminyene futhi ezisindayo, umuthi kungenzeka uthole le mucosa.
Kuyinto kokubili abadala kanye nezingane bakwazi njalo banakekele ngalo ingaphakathi acinene, kusukela ososayensi Novosibirsk futhi izidakamizwa "Dolphin" yadalwa, esiza ukwenza inqubo yokugeza nasopharynx kuyinto nicer okuningi futhi ukhululekile nakakhulu. Ebhodleleni ngoba ephefumula futhi 30 izikhwama ingxube ekhethekile ithuthukiswe ngesisekelo usawoti olwandle nge izithasiselo kusuka yemifino ezikhishwe futhi Licorice rosehip - lena nesifutho "Dolphin". Izibuyekezo bathi asidingi yimuphi ulwazi olukhethekile futhi akukho izimo ezikhethekile ukusetshenziswa kwaso. Noma yimuphi umuntu ongasisebenzisa ekhaya.
Salt, ehambisana ngoba lapho ephefumula, ikhiqizwa endaweni yasendulo Perm Sea, okwakuyindawo esizeni ukukhiqizwa yayo eminyakeni million 180 edlule. Kuyinto ingxube namaminerali ezingavamile, halite futhi carnallite. Salt walondoloza Ukwakheka eyingqayizivele ngokuphelele futhi ngokuphelele imvelo. Ngakho, lokho kuyinto ayitholakali yimuphi omunye nosawoti wamaminerali misela kusukela komhlaba, isetshenziswa ukulungiswa "Dolphin". Uphenyo ososayensi baye bame kwelokuthi imiphumela yayo usawoti olwandle lasendulo ifaniswe umphumela ngasolwandle sezulu enempilo.
Esikhathini amaminerali 40 ukuthi kungenziwa ezikhishwe uLwandle Lukasawoti iqukethe 133 izakhi yezimbiwa trace. isixazululo Medical senziwa okusekelwe ayizange obulimaza nolwelwesi lwamafinyila. Ngaphezu kwalokho, izixazululo amaminerali ukuthi asetshenziswa "Dolphin" ukulungiselela, afaneleka ngokugcwele ukusetshenziswa nsuku zonke ngoba ncamashí uketshezi begazi emzimbeni womuntu. I nesifutho iyahambisana noma yimuphi umuthi futhi Physiotherapy.
Labo abasebenzisa kakade noma uhlela ukusebenzisa imithi, "Dolphin", amazwana kusukela ochwepheshe ukhombe ezinye Izimo. Umuthi is hhayi Kunconywa uma ikhala kakhulu kwaleso esibekiwe, esinguJesu kukhona isifo indlebe ngesimo acute, hypersensitivity emuthini. Ngeke esetshenziswa ekwelashweni kweziguli ngisembhedeni iziguli ezinezifo ezingamahlalakhona ezinzima futhi abakhubazeke ngokwenqondo.
Kufanele wakhumbula ukuthi, uma kukhona kwangijabulisa anda ingcindezi ezindlebeni, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kufanele simiswe futhi kufanele uxhumane nodokotela babo.
"Augmentin" ingane: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa
Umuthi "lactase Baby": ukusebenzisa izici
Umuthi 'Palin ". imfundo
Lapho Lenin sezifile futhi washiya?
Musical Comedy Theatre (Minsk): umlando, repertoire, qembu
Isilawuli amakhebuli ukuze izikhulumi: kanjani ukukhetha?